ကျန်းမာပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် မပြုလုပ်သင့်တဲ့ နံနက်ပိုင်းအပြုအမူအချို့
Home Health & Beauty ကျန်းမာပြီး အောင်မြင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် မပြုလုပ်သင့်တဲ့ နံနက်ပိုင်းအပြုအမူအချို့
ကျွန်တော်တို့ နံနက်ပိုင်းအချိန်တွင် ပုံမှန်ပြုမူနေတဲ့ အမူအကျင့်အချို့မှာ လွှဲမှားချက်တွေရှိနေပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သာမန်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိလို့ လုပ်ပေမဲ့ အချို့အရာတွေက သင့်အတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီးကျန်မာရေးမညီညွှတ်တဲ့ နေထိုင်မှုကြောင့်အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Lifestyle_Myanmar ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် နံနက်ပိုင်းမှာ ဘာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ နံနက်ပိုင်းအချိန်ကိုရေချိုးခြင်းဖြင့် စတင်လိုက်ပါ။
ညဘက်ရောက်မှ ရေချိုးခြင်းထက် နံနက်ပိုင်းအချိန်မှာရေချိုးခြင်းက သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ တော်တော်များများဟာ နံနက်ပိုင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်အချိန်မှီရန်အတွက် အသည်းအသန်လုပ်ရတာကြောင့် ရေချိုးဖို့ကို အချိန်မပေးနိုင်တာက များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကရဲ့ ဒေါက်တာတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရ နံနက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေပြီး အတွေးအခေါ်လည်း သာမန်ထက်ပိုပြီး ပွင့်လန်းစေပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နံနက်ပိုင်းရေချိုးတာဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လန်းဆန်းစေခြင်း၊ အကြောများ ပြေလျော့ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူအခိုးများထွက်နဲ့ စိတ်ကြည်လင်မှုကို ရရှိစေနိုင်တာကြောင့်နံနက်ပိုင်းမှာ အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီးရေချိုးသင့်ပါတယ်။
၂။ နံနက်ပိုင်းမှာ ရေပူရေအေး ဘယ်ဟာနဲ့ချိုးသင့်သလဲ။
ရေပူနဲ့ရေချိုးခြင်းဟာ အပန်းဖြေတဲ့ အချိန်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပေမဲ့ နံနက်ပိုင်းအချိန်မှာ သင့်ရေပူဖြင့်ရေချိုးမိလျှင်တော့ သင့်ကို အိပ်ယာထဲသို့ပြန်သွားချင်စိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ ရေပူထက် ရေအေးဖြင့်ချိုးခြင်းက ပိုပြီး အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ ရေအေးဖြင့် ရေချိုးခြင်းကြောင့် သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးပြီး ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို တိုးမြှင့်ပေးတဲ့အပြင် သင့်ကိုလည်း လန်းဆန်းမှုကိုရရှိစေပါတယ်။ ရေပူဖြင့် ရေချိုးခြင်းဟာ အသားအရေကို ခန်းခြောက်စေနိုင်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ ရေအေးဖြင့် ပုံမှန်ရေချိုးရင်တော့ တစ်နှစ်ကို အလေးချိန် ၉ပေါင်ထိ လျော့ကျစေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Social Media များခေတ်စားလာတာကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ လူတိုင်းလိုလိုအိပ်ယာထတာနဲ့ ဖုန်းကိုအရင်ဦးဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် မနက်ပိုင်းအချိန်ဟာ အရမ်းကိုအလုပ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် ဖုန်းသုံးဖို့အတွက် အချိန်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးယူတတ်ကြပါတယ်။ တန်ရင်ဆေး လွန်ရင်ဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဖုန်းကို ကြာရှည်အသုံးပြုနေခြင်းက သင့်အတွက်ကျန်မာရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ၊ စီးပွားရေအရ ဘယ်အရာမှ ကောင်းကျိုးမရှိသလို ဖုန်းသုံးဖို့ အချိန်မရှိတဲ့အခါမှာ အိမ်သာတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစားစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဟာ သင့်အတွက် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ ဘာဝတ်ရမလဲ တွေးရင် အချိန်ဖြုန်းခြင်း
များသောအားဖြင့် အပြင်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် နံနက်ပိုင်းအချိန်မှာ ကိုယ်ဝတ်ဖို့အတွက်အင်္ကျီရွေးရတာက သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကို ကုန်ဆုံးစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်က သင့်အတွက် သီးသန့်ယူနီဖောင်းမသတ်မှတ်ပေးထားလျှင် သင်ကိုယ်တိုင်ပဲသင့်အတွက် ယူနီဖောင်းသတ်မှတ်ပေးထားလိုက်ပါ။ Apple ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး စတိဗ်ဂျော့ကတော့ သူ့အတွက် ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်နဲ့ ရှပ်အင်္ကျီအနက်ရောင်တစ်ထည်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကို မလျော့သွားအောင် တန်ဖိုးထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်သွားတဲ့ ရက်တွေမှာ သင့်ရဲ့ ဗီရိုထဲ ရွေးရခက်တဲ့ အရောင်ကွဲအင်္ကျီတွေအများကြီးထားတာထက် အနက်ရောင်ဘောင်းဘီရှည် နဲ့ အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီဒါမှမဟုတ် သင့်ကြိုက်တဲ့ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီကိုသာ သင့်အလုပ်အတွက် ယူနီဖောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထည့်ထားပေးထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။
၅။ နံနက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုအစားအစာမျိုးစားသင့်သလဲ။
ကျန်းမာရေးအတွက် အဟာရစောင့်ရှောက်ရေးကျွမ်းကျင်သူ Chelsey Amer ရဲ့ အဆိုအရ နံနက်ပိုင်းမှာ သီးနှံတစ်ပန်းကန်ကို စားသုံးချင်းထက် ပီဇာတစ်ချပ်ကိုစားသုံးခြင်းက သင့်အတွက်ကျန်မာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် နံနက်ပိုင်းအချိန်မှာ အခြားအစားအစာတွေ စားသုံးခြင်းထက် ဗီတာမင်ပြည့်ဝမှုရှိတဲ့ အစားအစာမျိုးကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။
၆။ အစာစားပြီးလျှင် ဘာအရင်လုပ်သင့်သလဲ
အစာစားပြီးခြင်း သွားကို အရင်ဦးဆုံးမတိုက်သင့်ပါဘူး။ သွားတိုက်ဆေးမှာပါဝင်တဲ့ Citric Acid နဲ့ Phosphoric Acid ဟာ သွားကြားမှာရှိတဲ့စားကြွင်းစားကျန်ဖြင့် ထိတွေတဲ့အခါမှာ အားနည်းချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားစာပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ဦးဆုံးလုပ်သင့်တဲ့အရာက ရေဖြင့် ပလုတ်အရင်ကျင်းသင့်ပါတယ်။ ပလုတ်ကျင်းခြင်းဟာ သွားကြိုသွားကြားမှာရှိတဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးပါတယ်။ ပလုတ်ကျင်းပြီး နာရီဝက်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာ သွားတိုက်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
၇။ နံနက်ပိုင်းမှာ black ကော်ဖီ/ ကော်ဖီခါးခါး သောက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လဲ
နံနက်ပိုင်းအချိန် သင့်ရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ဘာအစာအဟာရများမရှိခင် Black ကော်ဖီကို သောက်သုံးခြင်းဟာ အူချဉ်နာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနပညာရှင်များရဲ့ အဆိုအရ ကော်ဖီိသောက်သုံးရန်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်ကတော့ အိပ်ယာထပြီး ၃/၄ နာရီအချိန်အတွင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နံနက်ပိုင်းအချိန်မှာ ကော်ဖီမသောက်ရလျှင်မနေနိုင်သူတွေအတွက်ကတော့ ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါမှာ နို့ ပါဝင်သောကော်ဖီ သို့မဟုတ် မုန့်တစ်ခုခုဖြင့် ရောသောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အစာအိမ်အထဲတွင် ဘာအစာအဟာရများမရှိခင် ကော်ဖီသောက်သုံးဖြင်းဟာ ကျန်မာရေးအတွက် ဆိုးရွာတဲ့ရလဒ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီကို တနေ့လုံးကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုဆိုးမလဲ?
လူတဈယောကျအတှကျ နံနကျပိုငျးမှာ မပွုလုပျသငျ့တဲ့ အမူအကငျြ့အခြို့
ကြှနျတျောတို့ နံနကျပိုငျးအခြိနျတှငျ ပုံမှနျပွုမူနတေဲ့ အမူအကငျြ့အခြို့မှာ လှဲမှားခကျြတှရှေိနပေါတယျ။ ကိုယျကတော့ သာမနျလုပျလလေု့ပျထရှိလို့ လုပျပမေဲ့ အခြို့အရာတှကေ သငျ့အတှကျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပွီးကနျြမာရေးမညီညှတျတဲ့ နထေိုငျမှုကွောငျ့အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးမှုမြားဖွဈပှားတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Lifestyle_Myanmar ပရိတျသတျကွီးအတှကျ နံနကျပိုငျးမှာ ဘာတှကေိုရှောငျကွဉျရမလဲဆိုတာ ဗဟုသုတအနနေဲ့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ နံနကျပိုငျးအခြိနျကိုရခြေိုးခွငျးဖွငျ့ စတငျလိုကျပါ။
ညဘကျရောကျမှ ရခြေိုးခွငျးထကျ နံနကျပိုငျးအခြိနျမှာရခြေိုးခွငျးက သငျ့အတှကျပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။ တျောတျောမြားမြားဟာ နံနကျပိုငျးမှာ လုပျငနျးခှငျအခြိနျမှီရနျအတှကျ အသညျးအသနျလုပျရတာကွောငျ့ ရခြေိုးဖို့ကို အခြိနျမပေးနိုငျတာက မြားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဟားဗတျတက်ကသိုလျကရဲ့ ဒေါကျတာတဈဦးရဲ့ အဆိုအရ နံနကျပိုငျးမှာ ရခြေိုးခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ ဦးနှောကျကို ဖှံ့ဖွိုးစပွေီး အတှေးအချေါလညျး သာမနျထကျပိုပွီး ပှငျ့လနျးစပေါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နံနကျပိုငျးရခြေိုးတာဟာ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို လနျးဆနျးစခွေငျး၊ အကွောမြား ပွလြေော့ခွငျး၊ ခန်ဓာကိုယျမှ အပူအခိုးမြားထှကျနဲ့ စိတျကွညျလငျမှုကို ရရှိစနေိုငျတာကွောငျ့နံနကျပိုငျးမှာ အခြိနျအနညျးငယျပေးပွီးရခြေိုးသငျ့ပါတယျ။
၂။ နံနကျပိုငျးမှာ ရပေူရအေေး ဘယျဟာနဲ့ခြိုးသငျ့သလဲ။
ရပေူနဲ့ရခြေိုးခွငျးဟာ အပနျးဖွတေဲ့ အခြိနျမှာ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိပမေဲ့ နံနကျပိုငျးအခြိနျမှာ သငျ့ရပေူဖွငျ့ရခြေိုးမိလြှငျတော့ သငျ့ကို အိပျယာထဲသို့ပွနျသှားခငျြစိတျတှေ ပျေါပေါကျလာပါလိမျ့မယျ။ ရပေူထကျ ရအေေးဖွငျ့ခြိုးခွငျးက ပိုပွီး အားသာခကျြတှရှေိပါတယျ။ ရအေေးဖွငျ့ ရခြေိုးခွငျးကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ ဦးနှောကျလှုပျရှားမှုကို ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျလှုပျဆျောပေးပွီး ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို တိုးမွှငျ့ပေးတဲ့အပွငျ သငျ့ကိုလညျး လနျးဆနျးမှုကိုရရှိစပေါတယျ။ ရပေူဖွငျ့ ရခြေိုးခွငျးဟာ အသားအရကေို ခနျးခွောကျစနေိုငျပွီး သိပ်ပံပညာရှငျမြားရဲ့ အဆိုအရ ရအေေးဖွငျ့ ပုံမှနျရခြေိုးရငျတော့ တဈနှဈကို အလေးခြိနျ ၉ပေါငျထိ လြော့ကစြပေါတယျလို့ဆိုပါတယျ။
Social Media မြားခတျေစားလာတာကွောငျ့ နောကျပိုငျးမှာ လူတိုငျးလိုလိုအိပျယာထတာနဲ့ ဖုနျးကိုအရငျဦးဆုံးအသုံးပွုကွပါတယျ။ လူတဈယောကျအတှကျ မနကျပိုငျးအခြိနျဟာ အရမျးကိုအလုပျရှုပျတဲ့အခြိနျဖွဈတာကွောငျ့ ဖုနျးသုံးဖို့အတှကျ အခြိနျနညျးလမျးအမြိုးမြိုးယူတတျကွပါတယျ။ တနျရငျဆေး လှနျရငျဘေးဆိုတဲ့ စကားအတိုငျး ဖုနျးကို ကွာရှညျအသုံးပွုနခွေငျးက သငျ့အတှကျကနျြမာရေးအရ၊ လူမှုရေးအရ၊ စီးပှားရအေရ ဘယျအရာမှ ကောငျးကြိုးမရှိသလို ဖုနျးသုံးဖို့ အခြိနျမရှိတဲ့အခါမှာ အိမျသာတတျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ အစားစားနတေဲ့အခြိနျမှာပဲဖွဈဖွဈ ဖုနျးကိုအသုံးပွုခွငျးဟာ သငျ့အတှကျ ဆိုးရှားတဲ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျမှုကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
၄။ ဘာဝတျရမလဲ တှေးရငျ အခြိနျဖွုနျးခွငျး
မြားသောအားဖွငျ့ အပွငျထှကျတာပဲဖွဈဖွဈ၊ အလုပျသှားတာပဲဖွဈဖွဈ နံနကျပိုငျးအခြိနျမှာ ကိုယျဝတျဖို့အတှကျအကငြ်ျီရှေးရတာက သငျ့ရဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့အခြိနျကို ကုနျဆုံးစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျက သငျ့အတှကျ သီးသနျ့ယူနီဖောငျးမသတျမှတျပေးထားလြှငျ သငျကိုယျတိုငျပဲသငျ့အတှကျ ယူနီဖောငျးသတျမှတျပေးထားလိုကျပါ။ Apple ကိုတညျထောငျခဲ့တဲ့ နာမညျကွီး စတိဗျဂြော့ကတော့ သူ့အတှကျ ဂငျြးဘောငျးဘီတဈထညျနဲ့ ရှပျအကငြ်ျီအနကျရောငျတဈထညျကိုအမွဲဝတျဆငျခွငျးဟာ သူ့ရဲ့
ကိုယျပိုငျအခြိနျတှကေို မလြော့သှားအောငျ တနျဖိုးထားတာလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အလုပျသှားတဲ့ ရကျတှမှော သငျ့ရဲ့ ဗီရိုထဲ ရှေးရခကျတဲ့ အရောငျကှဲအကငြ်ျီတှအေမြားကွီးထားတာထကျ အနကျရောငျဘောငျးဘီရှညျ နဲ့ အဖွူရောငျရှပျအကငြ်ျီဒါမှမဟုတျ သငျ့ကွိုကျတဲ့ အကငြ်ျီ၊ ဘောငျးဘီကိုသာ သငျ့အလုပျအတှကျ ယူနီဖောငျးအဖွဈသတျမှတျပွီးထညျ့ထားပေးထားလိုကျတာအကောငျးဆုံးပါ။
၅။ နံနကျပိုငျးမှာ ဘယျလိုအစားအစာမြိုးစားသငျ့သလဲ။
ကနျြးမာရေးအတှကျ အဟာရစောငျ့ရှောကျရေးကြှမျးကငျြသူ Chelsey Amer ရဲ့ အဆိုအရ နံနကျပိုငျးမှာ သီးနှံတဈပနျးကနျကို စားသုံးခငျြးထကျ ပီဇာတဈခပျြကိုစားသုံးခွငျးက သငျ့အတှကျကနျြမာရေးကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နံနကျပိုငျးအခြိနျမှာ အခွားအစားအစာတှေ စားသုံးခွငျးထကျ ဗီတာမငျပွညျ့ဝမှုရှိတဲ့ အစားအစာမြိုးကို ရှေးခယျြစားသုံးသငျ့ပါတယျ။
၆။ အစာစားပွီးလြှငျ ဘာအရငျလုပျသငျ့သလဲ
အစာစားပွီးခွငျး သှားကို အရငျဦးဆုံးမတိုကျသငျ့ပါဘူး။ သှားတိုကျဆေးမှာပါဝငျတဲ့ Citric Acid နဲ့ Phosphoric Acid ဟာ သှားကွားမှာရှိတဲ့စားကွှငျးစားကနျြဖွငျ့ ထိတှတေဲ့အခါမှာ အားနညျးခကျြတှဖွေဈပျေါလာစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အစားစာပွီးတဲ့အခါမှာအရငျဦးဆုံးလုပျသငျ့တဲ့အရာက ရဖွေငျ့ ပလုတျအရငျကငျြးသငျ့ပါတယျ။ ပလုတျကငျြးခွငျးဟာ သှားကွိုသှားကွားမှာရှိတဲ့ စားကွှငျးစားကနျြတှကေိုရှငျးထုတျပေးပါတယျ။ ပလုတျကငျြးပွီး နာရီဝကျခနျ့ကွာတဲ့အခါမှာ သှားတိုကျဖို့ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။
၇။ နံနကျပိုငျးမှာ black ကျောဖီ/ ကျောဖီခါးခါး သောကျရငျဘာတှဖွေဈလဲ
နံနကျပိုငျးအခြိနျ သငျ့ရဲ့ ဗိုကျထဲမှာ ဘာအစာအဟာရမြားမရှိခငျ Black ကျောဖီကို သောကျသုံးခွငျးဟာ အူခဉျြနာကိုဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ သုတသေနပညာရှငျမြားရဲ့ အဆိုအရ ကျောဖီိသောကျသုံးရနျအသငျ့တျောဆုံးအခြိနျကတော့ အိပျယာထပွီး ၃/၄ နာရီအခြိနျအတှငျးဖွဈပါတယျလို့ဆိုပါတယျ။ နံနကျပိုငျးအခြိနျမှာ ကျောဖီမသောကျရလြှငျမနနေိုငျသူတှအေတှကျကတော့ ကျောဖီသောကျတဲ့အခါမှာ နို့ ပါဝငျသောကျောဖီ သို့မဟုတျ မုနျ့တဈခုခုဖွငျ့ ရောသောကျခွငျးကို ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ အစာအိမျအထဲတှငျ ဘာအစာအဟာရမြားမရှိခငျ ကျောဖီသောကျသုံးဖွငျးဟာ ကနျြမာရေးအတှကျ ဆိုးရှာတဲ့ရလဒျတှကေိုဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
Previous articleနှုတ်ခမ်းနီကို တနေ့လုံးကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုဆိုးမလဲ?
Next articleI’m NotaRobot ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက မင်းသမီး Chae Soo bin ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေ